GIS Pro Ihe kacha mma GIS ngwa maka iPad? - Geofumadas
Disemba, 2013 Apple - Mac, Geospatial - GIS, SuperGIS, topografia
Izu gara aga, mụ na otu enyi Canada nọ na-akparịta ụka nke gwara m banyere ahụmịhe ha nwere site na iji GIS Pro na usoro nyocha nke cadastral. Ọ fọrọ nke nta ka anyị ruo nkwubi okwu na ọ bụ ezie na e nwere ngwaọrụ ndị ọzọ, site na ihe dị na Storelọ Ahịa App nke a bụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị mma maka iOS, nke kachasị tinye onwe ya na mmasị nke ndị ọrụ mkpanaka; m na-ekwu iPad n'ihi na ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ na iPhone, nha ihu nha na-egbochi uru enwere ike ịnweta site na iPad obere ma ọ bụ iPad nkịtị.
Right now, na SuperSurv na-ahapụ ndị ya na mbụ version nke ihe ha na-gam akporo, Achọrọ m ikwu a nta banyere GIS Pro, nke a ga-enye ga nwere mpi ma ọ bụrụ na ha chọrọ igafe ọrụ SuperGIS Desktop ikekwe ama iji SuperPad , SuperField ma ọ bụ SuperSurv n'ihi na gam akporo.
GIS Pro emeela nke ọma na nke a, na-enwe ike ibubata faịlụ shp, gpx, kml na kmz. Mmachi ya dị na mmekọrịta ebe ọ bụ na ọ bụghị onye nrụpụta desktọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ ihe nkesa; You nwere ike mbupụ na otu faịlụ, Ọzọkwa na csv ma ​​ebe a SuperSurv nwere ike iri uru nke eziokwu nke ọgụgụ data mepụtara SuperGIS Server ọ bụghị naanị WMS kamakwa WFS-T. Ọ bụrụ otu a, -Olileanya- ma ọ bụrụ na ederede tabular data, enwere ike ịrụ ọrụ na arụmọrụ n'okpuru njikwa azụmahịa na usoro nkwado iwu na nchekwa na nchekwa data; ọ bụghị naanị SuperGIS Server ma ArcSDE ma ọ bụ Space Oracle.
Na GIS Kit a na-ejedebe, n'ihi na site na iTunes / email abụghị mmekọrịta mana faịlụ nke na-enyefe faịlụ na njikwa siri ike. Enyi anyị si Canada na-enwe ike ime ka usoro nke na-akpakọba na-Geodatabase mere na ArcSDE ka Pro version na-eweta nhọrọ nke na-ekere òkè feature ọmụmụ na ígwé ojii, ọ bụ ezie na a na-ewe ihe ọzọ ahụmahụ na-adịghị mma n'ihi na ngwaahịa nyere na weere na ọ bụ otu.
Anyị doro anya na ndị ọrụ na-eme nyocha sara anya ụdị cadastral, na mpaghara ebe a na-enyochabeghị ya tupu oge ahụ, ịnyefe faịlụ ndị a zuru ezu n'ihi na emesịa enwere ọrụ nke ndị ọrụ GIS ndị ga-ehicha data ma jikọta ozi dị ugbu a. . Ma n'ihe banyere mmezi cadastral, ihe ọ gụnyere bụ ịkewapụ nke akụrụngwa, ijikọ ma ọ bụ ndozi, nke ngwaọrụ ahụ wee daa. Ihe ịma aka bụ ime n'etiti ngwaọrụ ise na iri nke na-ekwe ka triangulation, tụọ bea, anya, pịa na snap, mepụta ihe yiri nke ahụ, topology ziri ezi dabere na usoro nyocha mbụ, wdg. Anyị ga-ahụ ihe SuperSurv na-enye na Jenụwarị 2014.
Banyere map ndị dị n’azụ, GIS Pro na-akwado ihe oyiyi Google na Bing, karịa ezuru. Ọzọkwa, OpenStreet Map, OpenTopo, Google / Bing n'okporo ámá na ọrụ WMS. Na nke a, ihe ịma aka dị na ihe oyiyi echekwara na mpaghara iPad, ebe ọ bụ na echeghị nha ebe nchekwa mana omume na-amanye ya. A gha achota uzo ichota ihe nzuzo na uzo di nma karie nke di rue taa, chere nke onye oru kwesiri iga n'ubi ma nwee ike iyi akwa offline echeghị na iCloud n'okpuru nyocha ọchụchọ ahụ; rectangle, ụzọ na-echekwa, gburugburu nke mmetụta ruo otu isi.
SuperSurv na nke a ga-agbasa ma ọ dịkarịa ala na ọrụ ndị a ma hụ ma ọ bụrụ na ha emee ihe dịka ihe GaiaGPS na-eme, nke ọ bụ ezie na ọ na-elekwasị anya na nsuso, njikwa cache dịtụ iche ma dịtụ mma karịa GIS Pro. SuperSurv ga-enwe ike ịgụ taịlị e mepụtara na SuperGIS Server yana kwa faịlụ dị n'ụdị stc nke ejiri ngwa ọrụ map nke SuperGIS Desktop, ọ ga-adị mkpa iji hụ ma enwere ike ijikwa kmz nwere orthophoto na-enweghị ntachi obi.
Anyị doro anya na ngwaọrụ mkpanaka ekwesịghị ịtụ anya ime ihe onye ọrụ na-arụ na desktọọpụ, mana enwere ụfọdụ arụmọrụ anyị ji GPS rụọ tupu ha enwee ihuenyo bara ụba na-efu. Echetara m na ya na Garmin ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ijide isi ma nwee ntụnyere maka eserese dị n’azụ; ugbu a, a na-emekwu ihe mana ọ dị ka anyị na-agagharị karịa iji mee usoro ndị dị mfe dịka ijide isi ma jiri ya tụnyere nke dị.
Ọrụ nke GIS Pro dị ole na ole, anyị nwere ike ịza oke gbasara imepụta ọkwa, ịgbanyụ, gbanye, ịyingomi, ịhazigharị na imepụta nghọta. Ana m enye ya ihu ọma m mana echere m na enwere ike ịkwalite ya na njirimara onye ọrụ; esi gbanwee akara ekwekọghị, ọkpụrụkpụ ma ọ bụ mgbe size na mfe ụzọ. Ruo n'ókè ụfọdụ, ojiji nke mkpịsị aka ndị ọzọ na ihuenyo ahụ lara n'iyi, dịka, dịka ọmụmaatụ, imetụ akara ngosi menu site na iji otu mkpịsị aka wee mee ka mmadụ abụọ ndị ọzọ nwee ike ịmegharị mgbanwe ndị bụ isi bụ naanị ngosipụta na nke ị na-ekwesịghị ịhapụ si na ihuenyo ịbanye na akara njikwa.
Ọ bụrụ na SuperSurv chọrọ ịlụ ọgụ na nke a, ọ ga-eji uru nke gam akporo anaghị eme otu ma ee iOS na otu, abụọ, atọ na ọbụna mkpịsị aka anọ.
Nsogbu nke nkenke dị na njedebe nke ngwaike, ya mere nke GPS nke iPad na-eweta. Amaghị m otú ndị enyi GIS Pro mere, mana pro pro na-enye ohere nkenke ka mma karịa nfe 3-mita dị mfe; Ọ ga-ekwe omume ịkọwapụta nkenke ziri ezi na ntinye nkenke ultra ka ọ ghara ijide ma ọ bụrụ na ịnwetaghị ya. Ọ bụ ezie na ọ na-eme, ọ dị m ka ọ bụ ihe ịma aka site ugbu a gaa n'ihu maka ngwa mkpanaka; otu esi enweta nkenke na-enweghị ịchọrọ 4G, na-eji njikọta na ụlọ ọrụ edozi site na ihe nkesa… ma ọ bụrụ na ọ bụghị, na nhazi nhazi. Nsogbu nke GIS Pro bụ na ekwenyeghị nkenke a, ọ dabere n'ọtụtụ mgbanwe; Nke a adịghị mkpa maka ọrụ nwere atụmatụ iji ala ma ọ bụ iji ala eme ihe, mana yana usoro iwu. Kedu ụzọ ọ bụla, echere m na ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma GIS Pro na -ọ dịkarịa ala n'inye onyinye-.
Maka ugbu a ọ dịghị mfe iji nyochaa ya, mana ọ ga-adị mma iji nakọta data n'otu ọnọdụ na iPad na gam akporo, n'otu oge, na GIS Kit na GIS Pro wee tụlee ma ọ bụrụ n'ezie na ọ bụ eziokwu banyere nkenke ... n'ihi ya, na mba ebe njikọta adabaghị. Maka ugbu a, m ga-eji ụdị m nwetara site na SuperSurv ma jiri ya tụnyere GIS Kit, m ga-agwakwa gị ebe ahụ.
Enwere m obi abụọ na SuperSurv nwere ihe dị ukwuu maka izi ezi, ọ bụ ezie na ha na-eji SuperPad eme ihe nke nwere ntinye GNSS ... n'ezie, maka GPS na-akwado Windows Mobile.
Na gini mere GIS Pro ji anabata ezi?
Anyị enweghị ike ikwubi na nke a bụ ihe kachasị mma GIS maka iPad, ma o yiri ka ọ bụ ihe ijuanya, mgbe ọ gbasara ndị ọrụ dị iche iche hụrụ ya n'anya, abịara m na mkpebi ahụ bụ maka ọrụ dị mfe maka ndị enyi «enweghị ọkachamara GIS«, Ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị na proprietary GIS. Echere m, ndị ọrụ ESRI ga-eji ArcPad, Supergis SuperSurv, Bentley Navigator Pano… mana maka ndị ịchọrọ:
Mepụta mpempe akwụkwọ site na mbadamba
Kọwaa nchịkọta nke isi ihe, akara, polygon, ụzọ
Tinye atụmatụ dị ka foto, akara, ederede, ndepụta nke ụkpụrụ
Nịm kpọọ nyo maka oge, anya, nkenke na àjà ihe ọ ultraụ ultraụ ultra
Jikwaa data na Lat / ogologo, UTM, MGRS na USNG
Na-eburu ihe ọ bụla raster / n'okporo ámá oyi akwa n'azụ
Kwuo òkè ọmụmụ site na iCloud
na ihe a niile na-enweghị iji ngwa desktọọpụ ...
Akwụsị GIS Pro bụ gị nhọrọ.
Ọ bụrụ na nhazi ndị ọzọ chọrọ ịlụ ọgụ na GIS Pro ... ha na-amalite site n'ịchọpụta otú ha si jiri nkwekọrịta zuru oke.
SuperSurv maka iOS
Previous Post«Previous Brazil na nlegharị anya nke ogbako “Afọ Na-abaghị uru” na-abịanụ
Next Post Mepụta map ntuli aka na Fusiontables - na nkeji 10Next »
2 Na-aza "GIS Pro Kasị Mma GIS App maka iPad?"
Ezi ihe ngwa ahụ na-arụ ọrụ maka gị.
M nwere afọ abụọ nke na-eji Giskit pro, ma ọ bụ a nnọọ elu ngwa intuititiva na mfe njikwa n'ihi na ọrụ na obere ihe ọmụma nke GIS, geotif management bụ ọma ọmụmụ, na shapefile mfe ikwu site mail na Dropbox. E nwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu. Site na nkwenye nke weebụsaịtị a ka m zụrụ ngwa a.